Iimveliso zeBarium Hydroxide ikakhulu zineBarium Hydroxide octahydrate kunye neBarium Hydroxide monohydrat.
Okwangoku, amandla emveliso e-Barium Hydroxide octahydrate angaphezulu kwama-30,000 MT, kwaye amandla emveliso ewonke e-Barium Hydroxide monohydrate ngama-5,000 MT, ubukhulu becala iimveliso zeekristalline eziyimbumbulu. Ukongeza, kukho inani elincinci le-monohydrate yeBarium Hydroxide monohydrate. Umthamo wemveliso ye-Barium Hydroxide monohydrate kulindeleke ukuba ifike kwi-10,000 MT, kwaye ngokufanelekileyo, amandla emveliso ye-Barium Hydroxide octahydrate iya kwandiswa ngokufanelekileyo. E-China, i-Barium Hydroxide octahydrate ithengiswa ikakhulu ekhaya kwaye iBarium Hydroxide monohydrate yonke ithunyelwa phesheya. I-Barium Hydroxide octahydrate kunye ne-monohydrate ziimveliso ezimbini zetyuwa ye-Barium kunye nophuhliso olukhawulezayo kule minyaka idlulileyo.
I-Barium hydroxide octahydrate isetyenziswa ikakhulu kwi-barium grease, amayeza, iiplastiki, i-rayon, iglasi kunye ne-enamel kushishino lwezixhobo, imveliso ye-petroleum njengesixhobo esisebenza kakuhle, ioyile ecoliweyo, i-sucrose okanye isithambisi samanzi. Impahla eluhlaza ye-Barium Hydroxide monohydrate.
I-Barium Hydroxide monohydrate isetyenziswa ikakhulu njengesongezo kwi-oyile yokutsha yangaphakathi yokuthambisa ioyile, iplasticizer kunye nesomisi somxube kwishishini leplastikhi. I-Barium Hydroxide monohydrate enomxholo we-iron ophantsi (10 × 10-6 ngezantsi) inokusetyenziselwa iglasi ebonakalayo kunye nezinto ezinamandla.
I-Barium hydroxide isetyenziswa ngokubanzi njenge-synthesis ye-Synthesis ye-phenol Resin. Impendulo ye-polycondensation kulula ukuyilawula, i-resin viscosity elungiselelwe iphantsi, isantya sokuphilisa sikhawuleza, i-catalyst kulula ukuyisusa. Umthamo wesalathiso yi-1% ~ 1.5% ye-phenol.Ikwasetyenziswa njengesixhobo sokunyibilikisa i-urea eguqulweyo ye-phenol-ye-formaldehyde. Imveliso ephilisiweyo ilubhelu. Intsalela ye-Barium yeTyuwa kwi-resin ayichaphazeli ipropati ye-dielectric kunye nokuzinza kweekhemikhali.
I-Barium Hydroxide isetyenziswa njenge reagent yohlalutyo, ikwasetyenziswa ekwahlukaniseni nasekwenzeni isulphate kunye nokwenza i-Barium Ityuwa, ukumiselwa kwekhabhon dayoksayidi emoyeni. Ubungakanani beklorophyll. Ukucokiswa kweswekile kunye neoyile yezilwanyana kunye neyemifuno. Isicoci samanzi esibilayo, isibulali zinambuzane kunye nomzi mveliso weerabha
IHydrosulfite De Sodium, Natrium Hydrosulfite, Calcium Bromide Anhydrous, IHydrosulfite, Ulwelo lweCalcium Bromide, Isisombululo seCalcium Bromide,